Mas'uuliyadda bulshada - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Deegaanka u saaxiibtinimo iyo horumar waara
Yizheng warshadaha culus waa khabiir ku ah qalabka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah iyo qalabka soo saarista bacriminta isku dhafan. Meel kasta oo ay joogto, shirkaddu waxay "ka dhigtaa ixtiraamka qiyamka bulshada iyo caadooyinka bulshada" xukunkeeda koowaad.
Intii lagu gudajiray fulinta ganacsiga caalamiga ah iyo raadinta koritaanka faa iidada, yizheng had iyo jeer wuxuu ilaaliyaa ilaalinta deegaanka meesha ugu horeysa wuxuuna kawada shaqeeyay horumarka waara ee dhaqaalaha aduunka.
Waxaan sii wadaynaa sadaqada ilaa dhamaadka
Iyada oo leh dareen adag oo masuuliyadeed bulsheed, Yizheng warshadaha culus waxay u qaadataa deeqsinimo hadaf kale oo ganacsi. Waxqabadyada ku deeqida iskuulada iyo caawinta dadka saboolka ah dhammaantood waxay ka sheekeeyaan sheekada Yizheng.
Tan iyo 2010, Yizheng waxay ugu deeqday dugsi in ka badan 20 carruur ah oo ku nool laba tuulo oo maxalli ah oo ku yaal Afrika, taas oo ay sii dheer tahay inay sannad walba lacag siiso qoysaskooda.